Banyere Anyị - Ningbo Younghome houseware Co., Ltd.
E guzobere ụlọ ọrụ anyị maka afọ 4 ma bụrụ ụlọ ọrụ na -elekwasị anya na mmepụta hookah na mbupụ hookah. Ụlọ ọrụ mmepụta ihe nwere mita mita 1,400 na ndị ọrụ 70. Njirimara anyị bụ ikike ịhazi nhazi yana ọsọ ọhụrụ nke ngwaahịa ọhụrụ. Ka ọ dị ugbu a, o jeela ọtụtụ ụlọ ọrụ shisha e-commerce buru ibu ma wetara ha atụmatụ ngwaahịa ọhụrụ.
Anyị na -etinye echiche dị oke mkpa n'echiche nke imepụta ngwaahịa, ma na -aga n'ihu na -enyocha ahịa onye ahịa iji mee mgbanwe. Anyị nwere ndị otu na -eto eto nke ga -ewetara gị usoro dị iche iche na nke dị iche site na mmezu usoro ruo na ịhazi nkwakọ ngwaahịa. Ogologo oge ị nyere echiche, anyị ga -aghọta ya karịa atụ anya.
Na mgbakwunye, anyị nwere ndị otu nyocha zuru oke na ọkachamara nke ga -enye ndị ahịa ọrụ nyocha 100% zuru oke ma nwee ike nye ndị ahịa akụkọ mkpesa nnweta nyocha nke achọrọ. Anyị ejerela ọtụtụ ndị ahịa e-commerce nnukwu ozi ozi. Anyị nwere ngwọta zuru oke otu nkwụsị site na ịchepụta ngwaahịa na ngwugwu iji gbochie mmebi nke ngwongwo. Ọnụ afọ ojuju onye ahịa dị oke elu.
Ọrụ Nnyocha zuru ezu
Soro anyị rụọ ọrụ
Ma ị bụ akara, onye na -ere ahịa ma ọ bụ onye nkesa, ị nwere ike ịchọta ihe ga -adịrị gị mma mgbe niile!
Ị nwere ike izitere anyị ajụjụ dịka ozi kọntaktị na weebụsaịtị, anyị ga -aza gị n'ime otu ụbọchị. Na mgbakwunye na ngwaahịa dị na weebụsaịtị, anyị nwere ike ịnye nhazi.
Ọ bụrụhaala na ị na -enye eserese ma ọ bụ nlele, anyị nwere ike imere gị otu ngwaahịa. N'otu oge ahụ, anyị na -akwado nhazi agwakọta, ị nwere ike jikọta karama na hookah kachasị amasị gị, ma hazie agba dị iche iche.
Ọ bụrụ na ịchọghị ịtụ uka na mbido, ọtụtụ ngwaahịa anyị dịkwa na ngwaahịa, yabụ ị nwere ike bido jiri obere & ngwakọta ngwakọta. Anyị dị njikere ịkwado gị ụdị ahịa kacha ere dị ka ahịa gị siri dị.